ဥရောပမော်ကွန်းခရီးသွားခြင်း | စာမျက်နှာ4၏ 27 | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ သင်သည်ဥရောပသို့သင်၏ပထမဆုံးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေလျှင်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိလှပသောမြို့ကြီးများအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်. ငါတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြပြီ 10 သင်ဥရောပ၌ရှောင်ရှားသင့်တယ်ခရီးသွားအမှားတွေ. တစ်ခရီး…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အကယ်၍ သင်ကောင်းစွာအစီအစဉ်ဆွဲလျှင်ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များသည်မိဘများနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးကလေးများအတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်. ဥရောပသည်ရဲတိုက်နှင့်တံတားများ၏မြေဖြစ်သည်, အစိမ်းရောင်ခမ်းနားထည်ဝါစွာပန်းခြံများ, မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်မင်းသမီးလေးအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ကျယ်ပြန့်သောဥရောပနိုင်ငံများသည်ဒဏ္legာရီများနှင့်နတ်သမီးပုံပြင်များ၏မူလအစဖြစ်သည်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများ, ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်သောကျေးရွာများ. အလယ်အလတ်နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများနှင့်နီးစပ်သောသို့မဟုတ်ထုံးကျောက်တောင်များနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေလိမ့်မည်, ဥရောပရှိပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျေးရွာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်….
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင်သည်ဥရောပ၌စနေ၊ တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောအားလပ်ရက်အတွက်ခရီးထွက်သည်ဖြစ်စေ၊, သင်အမြဲတမ်းအနားယူရန်အချိန်ယူသင့်သည်. ပျော်ပွဲစားပွဲသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများနှင့်အမြင်များကိုအနားယူရန်နှင့်လေးစားရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏အပေါ်စတင်ရန်ကူညီရန်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...